Fiarovan-tena amin'ny "coronavirus" :: Mihamafy ny fepetra raisin' ny fanjakana momba ny fihibohana • AoRaha
Fiarovan-tena amin’ny « coronavirus » Mihamafy ny fepetra raisin’ ny fanjakana momba ny fihibohana
Tsikaritra ny tsy fanajana araka ny tokony izy an’ireo toromarika momba ny fihibohana any an-trano mihatra eto amin’ny faritra Analamanga sy Toamasina voalohany sy faharoa. Nambaran’i Tianarivelo Razafimahefa, minisitry ny Atitany sy ny fitsinjarampahefana sady mpitantana ny ivon-toerana fibaikoana ny « Covid-19 » (CCO) fa “hamafisina ireo fepetra mikasika ny fihibohana ao an-tokantrano”.
“Aoka ho tsapantsika fa zava-doza io aretina io. Aleo isika tsy mivoaka ny trano mihitsy aloha raha mbola azo atao. Maro ihany anefa ireo olona tsy manaja izany. Toy ireny andro fety ireny, ohatra, teny Alarobia satria nahitana fitohanan’ny fiara”, hoy izy, nandritra ny fandaharana manokana tamin’ireo haino aman-jery rehetra, omaly tolakandro.
Notsindriany fa tsy azon’ ny fiara atao ny mivezivezy an-kalalahana eto Analamanga sy any Toamasina I sy II raha tsy misy antony manokana. “Tsy mahazo mihoatra ny olona roa ny ao anaty fiara rehefa hiantsena. Olona iray ihany koa no mahazo mivoaka miantsena. Manomboka tamin’ny 12 ora antoandro dia tsy misy intsony ireo fiara na olontsotra mivezivezy tsy amin’ antony”, araka ny fanampimpanazavana noentin’i Tianarivelo Razafimahefa. Ho an’ireo fiara miasa hiditra eto Analamanga sy Toamasina I sy II kosa dia mila mangataka fahazoandalana avy amin’ny CCO, amin’ny alalan’ny mailaka na antso an-tariby. Fantatra fa isan’izany ireo manam-pahoriana, na marary tampoka mila fitsaboana maika; ireo mpitsabo na ireo mpitandro ny filaminana koa dia mahazo an’io fahazoandalana manokana io.
Notsipihin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena Rakotonirina Léon Richard fa fiarovan-tena sy ny fianakaviana ary koa ny firenena amin’ny aretina Coronavirus no anton’izao fepetra izao. “Tsy handefitra amin’ny fandikana an’izany izahay, indrindra fa ny fanajana an’ireo ora tsy azo ivezivezena”, hoy izy. Nohamafisin’ny mpitandro ny filaminana ireo sakana amin’ireo lalam-pirenena mivoaka an’Antananarivo, omaly, tahaka ny lalam-pirenena voalohany mihazo an’ i Tsiroanomandidy.
Nanambara ihany koa ny Prefen’ny polisy eto Antananarivo renivohitra, ny jeneraly Angelo Ravelonarivo fa handray fepetra hentitra manoloana ny gaboraraka amin’ny fandikana ireo fepetra fihibohana napetraky ny fitondram-panjakana ireo. Isan’ny fepetra noraisin’ ny fitondram-panjakana koa ny fampiatoana an’ireo sidina an’habakabaka anatiny mivoaka sy miditra eto Antananarivo sy Toamasina.
Vavaky ny FFKM